अडियाेकाे लागि यता क्लिक गर्नुहोस्
पुन : प्रेम तामाङलाई हामीले चिन्दैन ? प्रेम तामाङसँग मात्र हिसाबकिताब छ भने उसैसँग टुंग्याउनुस् न त कुरा सकिएन ? धेरै कुरा गरिराख्नुहुन्छ ? सर, राम्रो कुरालाई नराम्रोतिर नलग्नुस् है, तपाईंलाई मैले सिधै कुरा गरेको । हाम्रो पार्टी हो, संस्था हो । तपाईंको झूठा मुद्दा आइपुगेको छ । छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुहोस् ।
म पुलिसको नजिक छु, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भनेर नसोच्नुस् । तपाईंको रक्षा पुलिसले गर्न सक्दैन । पुलिसले यो देशको प्रधानमन्त्रीको त रक्षा गर्न सकेको छैन भने तपाईंको… । तपाईंको को–कोसँग लेनदेन छ, चाँडो प्रेम तामाङसँगै होस् या कोही ? होइन भने राम्रो हुन्न । मैले भनिसकेको छु, म तपाईंसँग धेरै लामो बकबक गर्दिन । तपाईंले फोन गरेरै यो केस मिलाउनुभएन भने हामी भेट्छौं । त्यसपछि कुरा हुन्छ, तपाईंसँग धेरै कुरा के गर्नु… ।’
हामीलाई प्राप्त अडियोअनुसार पटक–पटक आफ्ना अज्ञात सहयोगीमार्फत सापकोटालाई प्रेम तामाङसँगको हिसाब मिलान गर्न दबाब दिनु, यसपूर्व पनि एक्लै पारेर गुण्डा लगाई रकम असुल गर्नु र पूर्वपार्टनरसमेत रहेका उनीहरूबीच लेनदेन विवाद रहनुले प्रेम तामाङले नै विप्लव नेतृत्वको पार्टीको नाममा ठगीधन्दा चलाइरहेको आशंका हुन्छ । जन आस्थाबाट !